စက်မှုဥယျာဉ်(မြို့သာ) စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်၍ FIDH ၏ အစီရင်ခံစာ လက်ရှိ အခြေအနေမှန်နှင့် ကွဲလွဲမှု? - Yangon Media Group
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့နှင့် မန္တလေး-မြို့သာစက်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်ရေးအများပိုင် ကုမ္ပဏီတို့ ပူး ပေါင်းအကောင်အထည်ဖော်လျက် ရှိသော စက်မှုဥယျာဉ် (မြို့သာ) စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်၍ International Federation For Human Rights (FIDH) မှ ထုတ်ပြန်သော အစီအရင်ခံစာတွင် လက်ရှိအခြေ အနေမှန်နှင့် ကွဲလွဲမှုများရှိနေပြီး လက်ရှိတွင် စီမံကိန်းအတွင်း ပြည်ပ ကုမ္ပဏီများ၏ စက်ရုံလေးရုံနှင့် ပြည်တွင်းကုမ္ပဏီတစ်ခု၏ စက်ရုံတစ်ရုံ စတင်လည်ပတ်နေပြီဖြစ်၍ ဒေသခံဦးရေ ၁၈ဝဝ အတွက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးပေးနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
”ဒီအစီရင်ခံစာနဲ့ပတ်သက်လို့ ပြန်လည်ရှင်းလင်းတင်ပြထားချက်ကို မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ဆီ တင်ထားပြီးဖြစ်သလို ဒီလအတွင်းမှာလည်းသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုပြုလုပ်သွားဖို့ စီစဉ်ထားပါတယ်။ တောင်သူအမည်ပေါက်တဲ့ မြေနေရာတွေအတွက် နစ်နာကြေးအဖြစ် တစ်ဧကကို ကျပ်သိန်း ၂ဝ ပေးခဲ့သလို တောင်သူအမည်မပေါက်တဲ့နေရာတွေအတွက် ကရုဏာကြေးအဖြစ် တစ်ဧကကို ကျပ်ငါးသိန်းပေးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ ၁၈ ကျင်း ဂေါက်ကွင်းကိုလည်း လာမယ့်နိုဝင်ဘာလထဲမှာ ဖွင့်လှစ်သွားမှာပါ”ဟု မန္တလေး-မြို့သာစက်မှုဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးအများပိုင် ကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ အထွေထွေမန်နေဂျာ ဦးထွန်းရင်က အောက်တိုဘာ ၆ ရက်တွင် ပြောကြားသည်။
ဆီမီးခုံ(ဧရာဝတီ) ကုန်းတွင်း ပိုင်းဆိပ်ကမ်းကို တည်ဆောက်ပြီး စီးပြီဖြစ်ရာ တစ်နှစ်လျှင် တန်ချိန်နှစ်သိန်းခန့်အထိ အတင်အချ ပြု လုပ်နိုင်ရန် လျာထားကြောင်း၊ အဆင့်မြင့်ခေတ်မီစနစ်များကို အသုံး ပြုထားပြီး တန်ချိန် ၅ဝ အပြင် ပေ ၂ဝ နှင့် ပေ ၄ဝ ကွန်တိန်နာများကိုပါ အတင်အချပြုလုပ်ဆောင်ရွက်နိုင် မည့် ဆိပ်ကမ်းဖြစ်ကာ Semeikhon Jetty Port, International Semeikhon Port, Oil Tank Farm, Ayeyawaddy View Resort and Recreation, Passenger Ferry Terminak ဟူ၍ အပိုင်းငါးပိုင်းခွဲခြားကာ အကောင်အထည် ဖော်မည်ဖြစ်ကြောင်း စက်မှုဥယျာဉ် (မြို့သာ) စီမံကိန်းကို လာမည့် ၂ဝ၂ဝ ပြည့်နှစ်နောက်ဆုံးထားကာ အကောင်အထည်ဖော်သွားမည် ဖြစ်ပြီး စီမံကိန်းပြီးစီးပါက ဝန်ထမ်း နေရာတစ်သိန်းခွဲကျော်အတွက် ဒေသခံများကို အလုပ်အကိုင်အခွင့် အလမ်းများပေးနိုင်မည်ဖြစ်ကာ စီမံကိန်းအတွင်း ဟောင်ကောင်မှ သစ်ပါးလွှာစက်ရုံ၊ အင်ဒိုနီးရှားမှ တိရစ္ဆာန်အစာစက်ရုံ၊ တရုတ်နိုင်ငံမှ ကွတ်ကီးစက်ရုံ၊ ထိုင်းနိုင်ငံနှင့် မြန်မာဖက်စပ်ကွန်ကရစ်တိုင်စက်ရုံနှင့် ပြည်တွင်းမှအုတ်စက်ရုံများ လည်ပတ်လျက်ရှိသည်။
IOC က ၂ဝ၁၆ ရီယို အိုလံပစ် ဥက္ကဋ္ဌ နူဇ်မန်ကို လာဘ်စားမှုဖြင့် ရာထူးမှ ထုတ်ပယ်
မန္တလေးမြို့ရှိ ၇၃ လမ်းနှင့် ၇၈ လမ်းကြား အရှေ့နှင့် အနောက်ကို ပိတ်ထားသည့် ၃၈ လမ်းကို တိုးချဲ??